Booqo Chuck Berry ee Jadwalka Ugu Fiican ee Ku Saabsan St. Louis
Blueberry Hill waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan iyo caanka ah ee Delmar Loop, xaafad xiiso iyo xamaas leh oo ay ka buuxaan dukaamo gaar ah, makhaayado iyo naadiyo. Blueberry Hill waa makhaayad iyo muusikada ku nool miyuusiga oo furan muddo ka badan 40 sano oo lagu soo bandhigay dad badan oo ka kala yimid daafaha dalka iyo adduunka oo dhan.
Goobta iyo Saacadaha:
Blueberry Hill waxay ku taallaa 6504 Delmar oo ku taal wadnaha Delmar Loop.
Makhaayaddu waxay furan tahay Isniinta ilaa Sabtida laga bilaabo 11 subaxnimo illaa 1:30 duhurnimo, iyo axadda 11 subaxnimo illaa habeenbarka. Blueberry Hill sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada St. Louis oo furan on Thanksgiving iyo Christmas.
Cuntada iyo Cabitaanka:
Blueberry Hill waxay u adeegtaa sida caadiga ah sida maraqa, saladh iyo hamburgerka. Cuntada waaweyn waxaa sidoo kale ku jira alaabta quraacda (maalin walba la heli karo), cuntooyinka khudradda iyo macmudka sida macdanta almondin, digaag dufan iyo kilyaha mac. Maqaarka oo dhan ayaa la heli karaa laga bilaabo 11 subaxnimo illaa 9 galabnimo, oo leh liis yar oo habeenkii ah habeenkii 9kii duhurnimo Kushiinka wuxuu xiraa Axadda saacadda 11.00 iyo habeenbarka intiisa kale toddobaadka.
Makhaayadda waxay leedahay tiro wanaagsan oo ah beersaal la taaban karo oo ay ku jiraan Guinness, Steam Anchor iyo dhowr nooc oo Schlafly ah. Waxaa sidoo kale jira xulashada beerka la qurxiyo oo waaweyn, iyo sidoo kale khamri iyo cabitaan isku qasan.
Qaar badan oo soo booqda waxay yimaadaan Blueberry Hill muusiga nool. Inta badan riwaayadaha, oo ay ku jiraan falalka caanka ah ee maxalliga ah iyo kuwa qaran, ayaa lagu qabtaa qolka hoose ee qolka duck.
Munaasabada ugu caansan ayaa waxaa ka mid ahaa halyeeygii hore ee Rock and Rolls Chuck Berry. Wuxuu ciyaaray in ka badan 200 shaxan qolka taagan oo ku yaal qolka Duck Arbacada Arbacada bil kasta. Wuxuu ciyaaray finalkiisii ​​ugu dambeeyay ee Blueberry Hill October 2014, laakiin makhaayadda ayaa wali ka buuxsama sawirada iyo xusuusta kale ee taageerayaasha taageerayaasha Berry.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan fannaaniinta ayaa weli garaacaya marxaladda, eeg jadwalka miyuusigga ah ee bogga Blueberry Hill.
Meelaha kale ee lagu dhageysto muusikada live St. Louis, hubi John D. McGurk's Irish Pub ama Meelaha ugu sareeya ee Music Music ee St. Louis .
Blueberry Hill waa mid ka mid ah jilidiyaal farabadan oo xiiso badan Delmar Loop. Loop wuxuu sidoo kale ku yaallaa St. Louis Walk of Fame. Xiddigaha naxdinta leh ayaa loo jaray dhinaca lugaha iyagoo raacaya Delmar oo leh magacyada St. Louisans weyn. Dhammaan waxaa jira in ka badan 130 xiddigood oo loogu tala galay dadka caanka ah sida Chuck Berry, Miles Davis, Nelly, Maya Angelou iyo Tina Turner. Baro wax badan oo ku saabsan soo jiidashada bogga internetka ee St. Louis Walk of Fame.
Bandhigga Big Muddy Blues ee Laclede's Landing
Maalinta Shaqada Isbuucaan ee St. Louis
Parkwood State Park ee St. Louis County
Dhinaca St. Louis Area
Sawirrada Dayrta Maalmaha Bulshada ee Webster Groves
Booqo Cambodia's Festifaalka Biyaha si aad u Xoqto Wakhtiga Wanaagsan
Goobaha ugu fiican ee lagu iibsado Hawaiian Aloha Shirts
Le Havre, Faransiiska: Dhismaha Casriga ah iyo farshaxanka muuqaalka
8 ka mid ah Waxyaabaha ugu Fiican ee lagu Qabto Fez, Morocco
Hagaajinta Great NYC Hotels ee Qoysaska
Dalxiis ku waajib ah Santorini
Makhaayadaha ugu Caansan Chicago Museum Museum
8 Mowjadood ee Dugsi Dhigista Dayuuradda ah
Talooyin ku saabsan joogitaanka Hotelka Ice
Hal toddobaad oo Guatemala ah: Waddada Wanaagsan
Fikradaha Qoyska leh ee Maalinta Rainy ee San Diego
Waddada qalooca ah ee soo kabashada ayaa sii socota